U beddel wadista gudaha ee adag | War gadget
Beddelaan drive adag gudaha si dibadda
Ignacio Sala | | Kumbuyuutarro, Qalabka
Haddii kombiyuutarkaagii hore uu ku jiray qolka muddo dheer laakiin aad iibsatay laptop oo aad rabto inaad dib ugu soo ceshato xogta aad ku kaydisay, waxaan ku sameyn karnaa laba siyaabood: dib ugu soo celi hawlgalka iyo gacanta nafteena oo dulqaad leh maadaama ay u badan tahay inay tahay mid ka mid ah sababaha looga tagayo waxay noqon laheyd gaabiskeeda. Waxaan sidoo kale awoodnaa ka saar qafiska adag una rogo mid adag oo banaanka ah si loo helo macluumaadka aan kaydsanay ama u isticmaalno keyd dheeri ah.
Iibinta kombiyuutarku wali waxay ku dhacdaa dhicitaan bilaash ah eeda badanna waxay ku jirtaa kiniiniyada, oo ah aalad yar oo taabasho leh waxaan fulin karnaa ficillo isku mid ah oo illaa iyo hadda aan ku qaadnay kombuyuutarkeenaKaydinta masaafada, maadaama sida muuqata aanan isticmaali karin codsiyada aan haysan nooc ku habboon qalabkan, sida Photoshop, Final Cut, Premiere ... laakiin barnaamijyadan waxaa adeegsada koox aad u yar oo isticmaaleyaal ah.
Laakiin inkasta oo ay xaqiiqadu tahay in kiniiniyada ay noqdeen rootigeena maalinlaha ah, hadana kombuyuutar had iyo jeer waa loo sii baahan doonaa si loogu kaydiyo sawirrada aan ku qaadno aaladdayada gacanta, ha noqoto casriga ama kaniini. Xulashada ugu fiican ee lagu kaydin karo dhammaan noocyada noocan ah ee aan ka soo qaadanno aaladaha moobiilku badanaa waa dirawalada adag ee dibadda, maaddaama haddii kumbuyuutarkeennu uu saameeyo fayras ama darawalka adag uu waxyeello u geysto isticmaalka joogtada ah Waxaan waayi karnaa macluumaad aad u qiimo badan oo aanan awoodin inaan si uun uga soo kabanno, ilaa aynaan haysan kayd dhammaan waxyaabahaas ku jira adeegga kaydinta daruuraha.
1 Noocyada isku xidhka iyo cabirka darawalada adag
2 Hard drive ama xayndaabka dekedda?
3 Ku xir kumbuyuutarka darawalka adag ama kan wax lagu xiro
4 Sida loo helo dirawal adag oo dibadda ah
Noocyada isku xidhka iyo cabirka darawalada adag
Ugu horreyntii, waa inaan tixgelinno nooca isku xirka wadiddeenna adag, maaddaama kuwa ugu da'da weyn ay leeyihiin xiriir biinanka loo yaqaan 'IDE' halka moodooyinka ugu dambeeya ay na siinayaan nidaam isku xirnaan yar oo jilicsan iyo halka biinanka la waayey, ee loo yaqaan SATA. Sidoo kale waa inaad tixgelisaa cabbirka darawalka adag. Sida caadiga ah, haddii darawalka adag uu ku jiro taallo, cabirka Hard Drive-ka wuxuu noqon doonaa 3,5 inji, halka Haddii drive-ka adag laga soo saaro laptop-ka, cabirka Hard Drive-ka wuxuu noqon doonaa 2,5 inji.
Hard drive ama xayndaabka dekedda?
Hadda waa inaan si cad u sheegnaa waxa aan dhab ahaan dooneyno inaan ku sameyno darawalka adag. Haddii fikradda aan haysanno ay tahay inaan u isticmaalno sidii nidaam kaydinta dibedda ah, ikhtiyaarka ugu fiican ayaa ah inaan iibsanno kiis si loogu beddelo wadista gudaha ee gudaha mid banaanka ah, iyada oo la siinayo awooddeeda iyo fiilada USB-ga si loogu xiro kombiyuutarka. Maxaa intaa dheer na siiso geyn ka weyn markay tahay inaad nala qaadato meel kasta maadaama darawalka adag si buuxda loo ilaaliyo.
Laakiin haddii aan dooneyno inaan u isticmaalno si xilliyo-yar ah oo aan sidoo kale haysanno dhowr qalab adag, xulashada ugu fiican ee aan ka heli karno suuqa waa docks, aalad aan si dhakhso leh oo fudud ugu xiri karno darawalkeena adag. Qalabkani waa mid ku habboon haddii aan inta badan ku shaqeyno darawallo badan oo adag waana inaan beddelnaa inta jeer. Maxaa intaa dheer waa qumman tahay marka aan dooneyno inaan si dhakhso leh u dhejinno waddo adag Halkan waxaa ku yaal xiriiriyeyaal dhowr ah oo aad ka heli kartid guryo wadayaal adag iyo docks si aad u geliso darawallo adag.
Ku xir kumbuyuutarka darawalka adag ama kan wax lagu xiro
Mar alla markii aan iibsanay kiiska si aan ugu beddelno darawalkeenna adag xarun dibadeed ama meel lagu xidho, waa inaan ku sii soconnaa si ka duwan sidii hore, maaddaama haddii aan doorannay kiiska, waa inaan kor u qaadno ka hor inta aan ku xirin kumbuyuutarkeena. Ku rakibida sanduuqa diskiga adag waa nidaam aad u fudud oo qaadan doona dhowr daqiiqo oo keliya, maaddaama ay tahay inaan kaliya hagaajino isku xirnaanta awoodda disk-ka adag ee kiiska iyo ku xirnaanta dekedda USB ee kiiska, oo xiriir la leh waxaan awood u yeelan doonnaa inaan marin u helno xogta ku kaydsan qolka adag. Xaaladda dekedda rakibid looma baahna, maaddaama ay tahay inaan kaliya dhigno darawalka adag salka dushiisa, u hagaajinno si ay ugu habboonaato isku xirnaanta isla markiiba waxay bilaabi doontaa inay aqriso waxyaabaha ay ka kooban tahay.
Si aan ugu xirno kumbuyuutarkeena kumbuyuutarkeena adag, ama aan ku xirno kumbuyuutarkeena, kaliya waa inaan ku xirnaa isku xirka USB ee aaladda aaladda dekedda USB-ga ee kumbuyuutarkayaga. Marka xigta waa inaan sii wadnaa inaan ku xirno aaladda, ama guryo ama daaqad, shabakadda, si loo siiyo koronto si ay u shaqeyn karto. Inta badan qalabka adag ee casriga ah ee 2,5-inji uma baahna quwad koronto dibadda ah, maadaama ay guud ahaan yihiin waxay helayaan korantada looga baahan yahay inay si toos ah uga maamusho dekedda USB, illaa iyo inta aad ka sarreyso 2.0 ama ka sareeya.
Sida loo helo dirawal adag oo dibadda ah
Markii aan ku xirno fiilada USB-ga kumbuyuutarkayaga, waxaan arki karnaa sida astaan ​​cusub uu si toos ah ugu muuqdo maareeyaha faylka oo leh magaca aaladda, oo aan si dhakhso leh ugu heli karno adigoo gujinaya laba jeer jiirka. Si loo helo marin adag oo dibadda ah ama saldhig lagu rakibo halkaas oo aan dhignay dirawal adag oo aan dooneyno inaan marin u helno, nidaamku waa isku mid. Maamulaha faylkayaga ama Finder-ka (haddii aan ku sameeyno Mac) magaca darawalka adag ee su'aasha ah ee aan dooneyno inaan marin u helno ayaa soo muuqan doona adigoo riixaya laba jeer waxaan uheleynaa sidii inuu yahay ul USB ah.
Ugu horreyntii, waa inaan maanka ku haynaa inay tahay wax lagu talin karo in lagu tiirsanaado fikradaha wanaagsan ee noocan ah aaladaha ay Amazon na siiso, maadaama aan ka heli karno moodello aad u jaban oo noqon kara xabadka ugu dambeeya iyo wax dhaca ama shaqada hab gaabis ah bilowga.
Isku xirka USB dwaa inuu ahaadaa ugu yaraan 2.0 ama ka sareeya, maaddaama nooca 1.x uu ​​aad uga gaabis badan yahay kuwa dambe.
Haddii kumbuyuutarka aan ku xirmayno uu leeyahay USB 3.0 dekado, oo xidhiidhkiisu buluug yahay, hadda ugu dhaqsaha badan, waxaa lagugula talinayaa inaad soo iibsato qalab noocan oo kale ah oo la jaan qaadi kara noocaas USB-ka ah, maadaama wareejinta feylasha la sameyn doono si ka dhakhso badan qaababkii hore.
Markaad kumbiyuutarka adag ku xireyso kombuyuutarka, nidaamka feyl ee isku midka ah waa in la tixgeliyaa, maaddaama haddii aan u adeegsanno kumbuyuutarka adag ee PC-ga ah Mac ama dhinaca kale, waxay u badan tahay in ma heli karno xogta, ama inaan kaliya aqrin karno iyadoon suurtagal aheyn inaan tirtirno ama aan ku koobi karno macluumaad dheeri ah. Haddii disk-ka adagi uu madhan yahay dhibaato ma leh, maxaa yeelay kombuyuutarradeena ama Mac-da ayaan ka qaabeyn karnaa si ay u adeegsato nidaamka feyl-wadaagga ee ku habboon baahiyaheenna.
Nidaamka faylka waxaa lagugula talinayaa haddii aad si joogto ah u bedesho madal u dhexeysa PC iyo Mac waa ExFat, Nidaam fayl oo ku habboon labada nidaamba oo noo oggolaanaya inaan akhrino oo qorno macluumaadka iyada oo aan xaddidnayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Kumbuyuutarro » Beddelaan drive adag gudaha si dibadda
Waa ikhtiyaar aad u wanaagsan in meesha laga saaro darawalka adag si xaalad loo dhigo, haddii aan ka fariisaneyno kumbuyuutarka oo aan dooneyno inaan xafidno xogta ama aan haysanno keyd dibadda ka badan. Dhamaan wanaag.
Khadka internetka ee Spain, weli ma yahay mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan Yurub?